AU mg Hiditra
Real Estate Listings: » Business Directory » Furniture Companies » AU » Fanaka Replika avo lenta1
Paositra momba ny paositra: 3195
Ao amin'ny SK Designer Living dia mirehareha amin'ny fanolorana ny fanaka Replika tsara indrindra amin'ny vidiny mirary izahay mba hisarihana ny tsena rehetra, hiantohana izay rehetra maniry fanaka sy kojakoja vaovao Replica vaovao manana izany! Aza misalasala miantso amin'ny 03 9580 5068 raha mila fanazavana fanampiny.
Misafidiana sokajyResidential homes Houses Apartments Flats Townhouses Units Studios Villas Cottages Bungalows HomesLand lots Agricultural LandCommercial Real Estate Hotels Office spaces Industrial premisesAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Landscaping Companies Furniture CompaniesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Consultancy
Aostralia, fantatra amin'ny anarana hoe Commonwealth of Australia, dia firenena mahatoky izay misy ny tanin-dapan'ny kontinanta Australia, ny nosy Tasmania, ary ny nosy vitsy an'isa. Io no firenena lehibe indrindra any Oseania ary firenena fahenina lehibe indrindra manerantany amin'ny velarantany manontolo. Ny mponina 26 tapitrisa dia tena an-tanàn-dehibe ary mifantoka tanteraka amin'ny ranomasina atsinanana. Ny renivohitr'i Australia dia Canberra, ary ny tanàna lehibe indrindra dia Sydney. Ny faritra an-drenivohitra lehibe hafa ao amin'ny firenena dia i Melbourne, Brisbane, Perth, ary Adelaide. Teratany Australiana no nipetraka tao amin'ny kaontinanta nandritra ny 65000 taona talohan'ny nahatongavan'ireo mpikaroka tany holandey voalohany tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-17, izay nantsoina hoe New Holland. Tamin'ny 1770, ny antsasaky ny atsinanana atsinanan'i Aostralia dia notakin'ny Great Britain ary nanorim-ponenana tamin'ny alàlan'ny fitaterana an-tranomaizina ny zanatany New South Wales tamin'ny 26 Janoary 1788, daty iray izay lasa fetim-pirenen'i Aostralia. Nitombo tsy an-kiato ny mponina tao am-polony taona maro lasa, ary tamin'ny fotoana nitokanana volamena 1850, ny ankamaroan'ny kaontinanta dia nosavain'ireo mpanjifa eropeana sy ny fanjanahana satroboninahitra dimy hafa nanangana azy. Tamin'ny 1 Janoary 1901, ny federasiona enina dia federaly, niforona ny Commonwealth of Australia. Nanohana rafitra ara-politika demokratika liberaly i Australia nanomboka tamin'ny fanjakan'ny lalam-panorenan'ny parlemantera federaly, izay ahitana fanjakana enina sy faritany folo.